हेलीको धूमकेतुको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै चीजहरू कहिले देख्न सकिन्छ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
तपाईंले पक्कै सुन्नुभयो ह्याली धूमकेतु तपाईको जीवनमा केहि समय र तपाईलाई वास्तवमै थाहा छैन कि यो कसरी हो र यसले कसरी कार्य गर्दछ। सत्य यो हो कि यो एक धूमकेतु हो जसको कक्षा प्रत्येक years 76 बर्षमा पृथ्वीमा जान्छ। यो यहाँबाट एक ठूलो उज्यालो प्रकाशको रूपमा देख्न सकिन्छ। यो एक कुइपर बेल्ट भन्दा कम दूरी संग धूमकेतु मध्ये एक हो। केही अनुसन्धानले पुष्टि गर्दछ कि यसको उत्पत्ति मा छ Oort Cloud र त्यो शुरूमा यो यस्तो लामो बाटोको साथ एक धूमकेतु थियो।
केही वैज्ञानिकहरूले हेलीको धूमकेतुलाई पहिलो मान्छे जुन मान्छेले उसको जीवनमा दुई पटक देख्न सक्छ। के तपाई यस संसारमा सब भन्दा प्रसिद्ध धूमकेतुको रहस्य र गतिशीलता जान्न चाहानुहुन्छ? सबै पत्ता लगाउन को लागी पढ्नुहोस्।
1 के हो र हैलीको धूमकेतुको उत्पत्ति के हो
2 विशेषताहरु र कक्षा
3 ह्यालीको धूमकेतु कहिले फिर्ता हुनेछ?
के हो र हैलीको धूमकेतुको उत्पत्ति के हो
यद्यपि यो संसारमा सब भन्दा प्रसिद्ध धूमकेतु हो, धेरै मानिसहरूलाई अझै यो थाहा छैन कि यो के हो। यो एउटा ठूलो आकार र धेरै चमकको साथ एक धूमकेतु हो जुन पृथ्वीबाट देख्न सकिन्छ र यसले सूर्य ग्रहको वरिपरि पनि कक्षा ग्रहण गर्दछ। उसलाई आदरको साथ भिन्नता त्यो हाम्रो हो भने अनुवादक कक्षा हरेक वर्ष हो, ह्यालीको धूमकेतु प्रत्येक years 76 बर्षमा छ।
१ 1986 XNUMX मा यो हाम्रो ग्रहबाट अन्तिम पटक देखिएको थियोदेखि यसका कक्षाहरूको अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। यस धूमकेतुलाई वैज्ञानिकको नामबाट राखियो जसले १m०1705 मा एडमन्ड ह्यालीले पत्ता लगाएका अध्ययनहरूले पुष्टि गर्दछ कि अर्को पटक यो ग्रहमा अवलोकन गर्न सकिन्छ २० 2061१ सालको आसपास हो, हुनसक्छ जुन र जुलाई महिनामा।
मूलका लागि, यो सोच्दछ कि यो Oort क्लाउडको अन्त्यमा, गठन गरिएको थियो सौर्य प्रणाली। यी क्षेत्रहरूमा, सुरु हुने धूमकेतुहरूको लामो प्रक्षेपण हुन्छ। यद्यपि यस्तो सोचाइ छ कि ह्यालीले आफ्नो मार्ग छोट्याइरहेको थियो किनभने यसलाई सौर्यमण्डलमा रहेका विशाल ग्यासका दिग्गजहरू द्वारा समातिएको थियो। यही कारणले यो छ कि यो छोटो ट्र्याक रेकर्ड छ।
सामान्यतया सबै धूमकेतुहरू कुइपर बेल्टबाट छोटो प्रक्षेप आयो र यस कारणका लागि, यो बेल्ट ह्यालीको धूमकेतुको उत्पत्ति हो।
विशेषताहरु र कक्षा
इतिहासमा सब भन्दा प्रसिद्ध भएकोले, यो एक धूमकेतु हो जुन पूर्ण अध्ययन गरिएको छ। यसको ट्र्याजेक्टोरी प्रत्येक years 76 बर्षमा उत्पत्तिको बिन्दु पार गर्न जानिन्छ। यो परम्परागत च k्गको लागि एकदम छोटो छ। यद्यपि यो Oort क्लाउडबाट आयो, तर प्रक्षेप मार्ग कुइपर बेल्टका सबै धूमकेतुहरू जस्तै छन्।
सामान्यतया, प्रक्षेपक्रम पर्याप्त नियमित र राम्रोसँग परिभाषित हुन्छ र परिणाम स्वरूप, तपाईंको भविष्यवाणी एकदम सजिलो छ। अहिले सम्म त्यहाँ सबै वर्ष को रेकर्ड छ कि यो आफ्नो खोज पछि बित्यो र, यो यसको प्रक्षेपको साथ सही हुन सक्छ।
यसको आन्तरिक विशेषताहरूको लागि, यो एकदम पूर्ण संरचनाको साथ देख्न सकिन्छ र केन्द्रक र कोमाबाट बनेको हुन्छ। अन्य धूमकेतुहरूको तुलनामा, यो आकारमा धेरै ठूलो र धेरै उज्यालो छ। यद्यपि यो कालो शरीर हो, यो पृथ्वीको सतहबाट देख्न पर्याप्त उज्यालो छ। न्यूक्लियसको आयाम १ 15 किलोमिटर लामो र km किमि लामो र चौडा छ। यो कारणले गर्दा यसलाई ठूलो चite्गा भनिन्छ। यसको सामान्य आकार बदाम जस्तो देखिन्छ।
मूल पानी, कार्बन मोनोअक्साइड र डाइअक्साइड, मिथेन, हाइड्रोसाइनुरिक एसिड, अमोनिया, र formaldehyde जस्ता विभिन्न तत्वहरु मिलेर बनेको छ। यस चite्गाको चालको जम्मा लम्बाई धेरै मिलियन किलोमिटरसम्म पुग्छ।
ह्यालीको धूमकेतुको कक्षा अण्डाकार आकार र प्रतिगामी छ। यो पछिको दिशा ग्रहहरूको भन्दा विपरीत छ र १ 18 डिग्रीको झुकावको साथ। यो पर्याप्त राम्रो नियमित र परिभाषित छ, यसलाई अध्ययन र अनुसन्धानको लागि सजिलो बनाउँदछ।
ह्यालीको धूमकेतु कहिले फिर्ता हुनेछ?
ब्रिटिश खगोलविद् एड्मन्ड ह्याली पहिलो व्यक्ति थिए जसले धूमकेतुको कक्षा गणना गर्न सक्षम थिए भन्ने तथ्य यो होइन कि यो पृथ्वीको सतहबाट पहिले देखिएको थिएन। यो धूमकेतु प्रत्येक years 76 बर्षमा सतहबाट देखिएको छ। एडमन्ड ह्यालीले धूमकेतुको पथ भविष्यवाणी गर्न र गणना गर्न सक्षम थियो पहिले अन्य दृश्यावलोकन को लागी धन्यवाद।
पहिलो १ App1531१ मा अपियियानो र फ्र्राकास्टोरो द्वारा मनाइएको थियो। यसलाई ठूलो, बदाम आकारको धूमकेतुको रूपमा वर्णन गरिएको थियो। यसको ठूलो चमक थियो र पृथ्वीको सतहबाट सजीलोसँग देख्न सकिन्छ। वर्षौंपछि, केप्लर र लom्गोमन्टानसले देखेको दृश्य १ 1607०76 मा पनि रेकर्ड गर्न सकिन्छ, अर्थात 1682 1758 वर्ष पछि। १ he XNUMX२ मा जब उसले आफ्नै आँखाले यो देख्न सके, उनले घोषणा गरे कि यो लगभग १ XNUMX मा फेरि देख्न सकिन्छ।
यस खोजको साथ हेलीलाई यो धूमकेतु पनि भनिन्थ्यो। हालसालैको एउटा अध्ययन जुन पत्रिकामा प्रकाशित भएको हो Cosmology जर्नल इ come्गित गर्दछ कि यस धूमकेतुको पहिलो दर्शन सा.यु.पू. 466 XNUMX ईसापूर्वमा भएको थियो, सायद जुन जुन महिनामा अगस्टको अन्त्यसम्म।
अर्को दृश्य चिनियाँ खगोलविद्हरूले २ BC० ईसापूर्वमा रेकर्ड गरेका थिए। त्यो रेकर्डबाट, यो २ times पटक अहिलेसम्म 240 29 बर्षको प्रक्षेपको साथ देखा पर्‍यो। यदि पछिल्लो पटक तपाईंले एक अर्कालाई 76 मा देख्नुभयो भने, यो सायद २० 2061१-२०2062२ मा फेरि देखिने छ।
तपाईले आशा गर्न सक्नुहुन्छ, ईतिहासको सब भन्दा महत्वपूर्ण धूमकेतुको बारे जान्ने केही उत्सुकताहरू छन्। हामी तिनीहरूलाई यहाँ संकलन गर्दछौं:
धेरै चमकको बावजुद यसले बन्द गर्दछ, ह्यालीको धूमकेतु कालो शरीर हो।
१ 1910 १० मा त्यहाँ धूमकेतुको उपस्थितिको कारण थियो 400०० भन्दा बढी आत्महत्या यस घटनासँग सम्बन्धित जुन पेरूको आकाशमा एक अनौंठो रंगले ढाकियो।
यस धूमकेतुको लागि धन्यबाद, हजारौं पुस्तक र कथाहरू सम्बन्धित छन्।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईले इतिहासको सबैभन्दा प्रख्यात धूमकेतु राम्ररी चिन्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » ह्यालीको धूमकेतु
सुसान गार्नेरो भन्यो
मैले १ 19863मा मेरो छोरासँग ह्यालीको धूमकेतु देखेको छु, अर्जेन्टिनाको यूटीएनको सान फ्रान्सिस्को क्षेत्रीय विद्यालयको टेलिस्कोपबाट। मेरो छोरो years बर्षको थियो। यो एकदम उज्ज्वल नेबुला जस्तो देखिन्थ्यो, किनकि, म बुझ्छु, यो पृथ्वीको नजिकमा यत्तिको नजिक आएन जुन यो १ 1910 १० मा भयो। म २० its२ मा यसको फिर्ती देख्दिन तर मेरो छोराले देख्न सक्छ, उसले यसलाई दोस्रो पटक देख्न सक्छ (एकदम ठूलो सुविधा)। हामी ब्रह्माण्डको अनन्तको तुलनामा केहि छैनौं।
सुसन गार्नेरोलाई जवाफ दिनुहोस्
इमान्दार, जहाँसम्म मेरो कुरा हो, धूमकेतुलाई थाहा छ यो एक धूमकेतु होईन, म भन्न सक्छु कि यो केवल मानव जीवनमा १ वा २ पटक मात्र हुन्छ, यसले मलाई बुझ्ने बनाउँदछ कि यो एक किसिमको पृथ्वीको अतिरिक्त निगरानी हो। मानव को प्रगति र यदि हामी हो। एक दौडको रूपमा प्रगति गर्दै उनीहरूले राम्रोसँग बौद्धिक रूपमा पुगेको अवलोकन गरे र प्रत्येक or वा decades दशकमा उनीहरूले यो गर्दछ कि यदि तपाईले जहाज सजिलै पत्ता लगाउन चाहनुहुन्न भने उनीहरूले रडारको लागि अज्ञानीय चुपके मोड प्रयोग गर्दछन्। आगो भनेको के हुन्छ ?????
जुलियो सेसर गारिडो डेल रोजारियो भन्यो
म यसको सेकेन्ड किलोमिटर प्रति सेकेन्डमा अनुवादको गतिमा रुचि राख्छु, र ती ती years 76 बर्षमा जुन यात्रा गर्दछ ... एक धूमकेतु एक धूमकेतु हो र अरू केही पनि हुँदैन, कुनै रहस्य बिना, यसको एलियन्ससँग कुनै कुरा छैन ....
Julio Cesar Garrido del Rosario लाई जवाफ दिनुहोस्
पृथ्वीको व्यास के हो?